အာမခံ အခြေအနေ - Plasticizer Material Test Report-SGS(2)
အမြင်နှင့် စီးပွားရေး ဒဿန
ကမ်ဘာ့အမွငျ့ဆုံးအရညျအသှေးရှိ PVC ရပေိုကျ Sejong Flex သညျအကောငျးဆုံးထုတျကုနျမြားကိုထုတျလုပျသညျ။
အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမ - အရည်အသွေး အခြေအနေ - အာမခံ အခြေအနေ - ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ကြာရှည်ခံခြင်း - ယူနစ် ပြောင်းသောဇယား - ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်း
SEJONG FLEX သညျ SGS မှစဈဆေးသော PVC ရပေိုကျထုတျလုပျမှုနှငျ့ပလတျစတဈပစ်စညျးမြားအတှကျ Non-Toxic & Eco-Friendly Plasticizer ပစ်စညျးကိုအသုံးပွုသညျ။ အောကျပါစာမကျြနှာရှိစဈဆေးမှုအစီရငျခံစာအသေးစိတျကိုသငျကွညျ့နိုငျသညျ။ အသေးစိတျသိလိုပါကကြှနျုပျတို့အားဆကျသှယျပါ။
'Pure Hose' ကုနျအမှတျတံဆိပျ
Phthalate ပစ်စညျးမြား (DEHP, DBP, BBP, DNOP, DINP, DIDP, DEHA) နှငျ့ Heavy Metal (ခဲ၊ ကဒျဒီယမျ၊ မာကြူရီ၊ Hexavalent ခရိုမီယမျ) မြားကို SEJONG FLEX Spring Spring Hose မှတှရှေိ့ခဲ့ခွငျးမရှိ။ ဖကျတီးအစားအစာနှငျ့အရကျ (၂၀% ထကျမပိုသောအရကျပါဝငျမှု)
Certificate of patent - Pressure Hose ㅡManufacturing Metho
ဂြောင်နမ် ကင်မဲမြို့ ကင်မဲဒယ်ရို လမ်း ၂၆၆၂ လမ်းသွယ် ၁၃-၂၉(ဂျီနယ်ဒုံရပ်ကွက်)
အမှတ် ၁ စက်ရုံ : ဂြောင်နမ် ကင်မဲမြို့ ကင်မဲဒယ်ရို လမ်း ၂၆၆၂ လမ်းသွယ် ၁၃-၂၉
အမှတ် ၂ စက်ရုံ : ဂြောင်နမ် ကင်မဲမြို့ ကင်မဲဒယ်ရို လမ်း ၂၆၆၂ လမ်းသွယ် ၁၃-၂၅
အမှတ် ၃ စက်ရုံ : ဂြောင်နမ် ကင်မဲမြို့ ကင်မဲဒယ်ရို လမ်း ၂၆၉၄ လမ်းသွယ် ၁၃-၃၀
အမှတ် ၄ စက်ရုံ : ဂြောင်နမ် ကင်မဲမြို့ ကင်မဲဒယ်ရို လမ်း ၂၆၆၂ လမ်းသွယ် ၁၃-၃၂
သုတသေနနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးဌာန : ဂြောင်နမ် ကင်မဲမြို့ ကင်မဲဒယ်ရို လမ်း ၂၆၆၂ လမ်းသွယ် ၁၃-၃၂
အမေရိကန်ရုံး : 29 Smith St Englewood, NJ 07631
ဘူဆန်းရုံး : ဘူဆန်း ဟဲအွန်းဒယ် မြို့နယ် အူဒုံရက်ကွက် မာရင်းစီးတီး ၂ လမ်း ၃၈.
COPYRIGHT © 2020 SEJONG FLEX. လက်ရှိ ဝပ်ဘ်ဆိုက်ရှိ ဒီဇိုင်းနှင့် အချက်အလက်များ အားလုံးသည် ကိုင်တွယ်၍မရသော မူပိုင်ခွင့် အရ အကာအကွယ် ရရှိထားသော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။